Sina YF-H-907 efitrano fandraisam-bahiny vita amin'ny hoditra mpanamboatra sy mpamatsy | Yifan
tsy misy YF-H-907
TOETOETRA Sariitatra misy, Open Storage, Cable Management
KEVITRA Birao MDF avo gloss + vera matevina
DIMENSION TABLE 1800mmL * 400mmW * 420mmH +
Ahitana vatasarihana efatra lehibe hametrahana magazina sy handaminana magazina, DVD, lalao video, vondrona fanaraha-maso lavitra, sns.
Ny seta manontolo ao anatin'izany ny TV Stand, latabatra eo anilany, latabatra kafe, Kabinetra Buffet
Ny Mango Wood sy Marble Dark Oval Sideboard ary TV Stand dia fampisehoana fijanonana izay hampiditra glamor sy sophistication ao anaty tetikadinao eo noho eo. Kabinetra fitehirizana misy tampon'ny marbra mahatalanjona, ity kojakoja fanjairana kanto ity dia manome fotoana betsaka hanehoana ireo firavaka tianao indrindra eo amboniny rehefa mitahiry entana, mamorona endrika mahafinaritra tsy misy ezaka izay sady sahisahy no mahafinaritra.
Ampamirapirato ny toeram-ponenanao amin'ity sideboard fotsy fotsy ity. Amin'ny habaka fitehirizana be dia be, misy vatasarihana telo izay tsara handaminana kojakoja kely kokoa sy vata fipetrahan'ny varavarana midadasika malalaka izay misokatra hamoaka andian-talantalana anatiny ho an'ny entana lehibe kokoa. Izy io dia manasongadina taho mifangaro izay mifanaraka amin'ny famolavolana minimalista ary manome fidirana haingana sy mora amin'ny atiny voatahiry.
Hita amin'ny loko fotsy sy mainty, alao izany!
STYLE: Volavola tsara tarehy sy maoderina sy maoderina, fisehoana fotsy mirenty ary fananganana modely maoderina. Mamorona teboka eo no ho eo izy miaraka amin'ny endriny miavaka sy ny bikany ankehitriny.
MATERIAL: Material: frame: stainless steel electroplated gold color, top: MDF, vera fitaratra miloko volamena, fandefasana: voadona.Volam-panala voadio avo lenta (mahatohitra ny fahasimbana sy ny gorodona, ny hamandoana ary ny hafanana ambony) Ny famaranana fotsy manjelatra avo dia manana voajanahary famirapiratana izay taratry ny jiro tsara tarehy.
Halefa amin'ny fonosana feno ny kabinetra, ahafahanao mitondra azy mora foana any amin'ny efitrano tianao. Ilaina ny fivorian'ny tena. Satria singa lehibe kokoa io dia hanoro olona roa izahay amin'ny fizotran'ny fivoriambe. Ny fivoriambe dia tsy tokony handany fotoana be loatra amin'ny fanarahana torolàlana tsikelikely.
Previous: YF-H-906 latabatra kafe boribory mahitsy + fijoroana amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny vatasarihana rotatable amin'ny White & oak
Manaraka: Tabilao fisotroana kafe avo lenta an'ny YF-2001 izay manaitra anao amin'ny fomba mety indrindra
Stand TV maoderina
Efitra fandraisam-bahiny mitsangana amin'ny latabatra Tv
YF-H-802 latabatra fitaratra mora tezitra ...
Tabilao fisotroana kafe an-tampon'ny YF-2001 izay mahataitra anao ...
YF-H-805 Avaratra Italiana Quilted Mpamorona Marb ...
YF-H-803 latabatra fandraisam-bahiny lehibe napetraka